Maxkamad Xukuntay in la Sii Daayo Mubarak
Maxkamad ku taalla Masar ayaa go’aamisey in la sii daayo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mohamed Husni Mubarak. Mubarak waxa uu rafcaan ka qaatey xariggiisa oo la xiriira dacwado dhinaca musuqmaasuqa ah.
Maxkamad ku taala Masar ayaa go’aamisey in la sii daayo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mohamed Husni Mubarak. Mubarak waxa uu rafcaan ka qaatey xariggiisa oo la xiriira dacwado dhinaca musuqmaasuqa ah.
Mubarak oo muddo ku dhow 30 sanno ka talinayey Masar, haatanna ay da’diisu tahay 85 ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in dib loogu maxkamadeeyo dembiyo la xiriira doorkii uu ku lahaa dil loo geystey dadkii ka qeyb qatey kacdoonkii lagu ridey sannadkii 2011ka.
Warbixin iyo falanqeyn arrintaasi la xiriirta halkan hoose ka dhageyso.
Dhageyso warbixinta iyo falanqeynta Masar.